Aqalka Wakiilada oo maanta u codeynaya xil ka qaadista Trump – Hornafrik Media Network
Waxaa maanta la filayaa in Aqalka Kongreska Mareykanka uu u codeeyo mooshinka ka dhanka ah Donald Trump.
Qorshaha soo jeedinta xil ka qaadistiisa oo in muddo ah soo jiitamaysay ayaa la filayo in xildhibaannada Kongreska ay meel mariyaan maanta.
Waxaa la filayaa ka dib in mooshinkaas si dhab ah uu u meelmariyo Aqalka Sanetka.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sidoo kale warqad uu xanaaq badan ka muuqdo u qoray Gudoomiyaha Aqalka Kongreska, Nancy Pelosi oo uu ku eedeyay in ay dagaal ku tahay dimuqraadiyadda Mareykanka.
Haddii Kongreska uu meel mariyo qorshahan, waxaa loo sii gudbin doonaa aqalka sare ee Senetka, oo ka dib go’aan ka gaari doona soo jeedinta Kongreska.
Warqadda uu Trump u qoray Gudoomiye Nancy Pelosi, Wuxuu sidoo kale ku sheegay in qorshaha la doonayo in xilka lagaga qaado isaga ay tahay isku day afgembi. Sida loola dhaqmayana wuxuu ku tilmaamay dhibanayaashii qarnigii 17-aad ee Salem, kuwaas oo la dilay ka dib markii lagu helay dembi ah in ay sixiroolayaal ahaayeen.
Maxay tahay sababta shaqa joojinta loogu sameeyay Taliyaha Xabsiga Dhexe?